Iibso budada Methandrostenolone (72-63-9) Soosaarayaasha & Warshadaha
Dufanka Methandrostenolone (Dianabol) waa mid ka mid ah steroid-anabolic-anabolic oo leh sumcad weyn oo ka mid ah ciyaartoyda iyo jirka jirka adduunka. Waxaa si weyn loo isticmaalaa ujeedooyinka jir-dhiska iyo ujeedooyinka jirka si ay u caan baxaan.
Mashiinka Methandrostenolone (Dianabol) budada (72-63-9) video
Raw Methandrostenolone (Dianabol) budada (72-63-9)
Kalluun Methandrostenolone (Dianabol) waa budada anabolic anabolic. Noocyada firfircoon ee kiniinnada Dianabol iyo kaniiniyada budada Raw Dianabol si dhakhso ah ayuu u shaqeeyaa si ay si wax ku ool ah u kobciso murqaha murqaha iyo kordhinta qiyaasta jirka, si loo abuuro jawi anabolic ee jirka bini'aadamka oo ka faa'iideysanaya waxqabadyada dheef-shiid kiimikaadka.
Dianabol waxa kale oo ay kor u qaadaysaa awoodda difaaca nitrogen ee unugyada muruqyada ee jirka. Sidaa daraadeed taasi waxay tahay in ay hagaajinayso qadarka borotiinka ee laga soo saari karo jirkaada wakhti kasta oo sidaas ah taas oo ka qaybqaata koritaanka murqaha iyo xoogga.
Maxaa badan, Dianabol waxay si wax ku ool ah u cirib tirtaa dareenka daalka ee ay dadku la kulmi karaan inta lagu jiro jimicsiga caadiga ah. Dianabol waxaa kale oo loo aaneynayaa in la kobciyo calcium-ga oo ka soo baxa jidhka. Saameynta tani waxay ka badan tahay kalsiyumka waxaa lagu shubaa lafaha, sidaas darteedna kor u qaadaya awoodda guud iyo xasilloonida guud.
Mashiinka Methandrostenolone (Dianabol) budada (72-63-9) Smamnuucista
Product Name Biyaha Methandrostenolone (Dianabol)
Magaca Kiimikada Metandienone; Dianabol; Methanabol
Fasalka Daroogada Steroid anabolic afka
Molecular Wsideed 300.43512
barafku Psaliid 165-166 ° C
Fdib u soo celinta Psaliid 330.8 ° F
Biological Life-Life Saacadaha 3-6
Color Caddaan cadaanyo leh kareemka crystalline cad
SOlubility Dhaqdhaqaaqa suubin biyo
Waa maxay budada methandrostenolone (Dianabol) budada (72-63-9)?
Maxaa badan, Dianabol waxay si wax ku ool ah u cirib tirtaa dareenka daalka ee ay dadku la kulmi karaan inta lagu jiro jimicsiga caadiga ah. Dianabol waxaa kale oo loo aanaynayaa kicinta kalsium ee jirka. Saameynta tani waxay ka badan tahay kalsiyumka waxaa lagu shubaa lafaha, sidaas awgeedna kor u qaadaya xoogga jirka iyo xasilloonida.
Sida Raw Methandrostenolone (Dianabol) budada (72-63-9) shuqullada
Dianabol wuxuu u shaqeeyaa siyaabo kala duwan si uu u caawiyo kobaca murqaha oo degdeg ah, mid ka mid ahna wuxuu kordhiyaa soosaarka borotiinka.
Tani waxay ka caawineysaa abuurista murqaha cusub iyo nadiifinta unugyada waxyeelada leh. Tani, marka hore, waxay bixisaa natiijooyin si aad u muuqata! Qaabka kale Dbol wuxuu ka caawiyaa jidhka inuu sii kordhiyo xajinta nitrogen.
Nidaamka dheecaanka badani wuxuu ka kooban yahay waqti dheer oo aad anabolic joogi karto! Dianabol ayaa sidoo kale ka caawisa jirkeena in uu isticmaalo karbohidraatka aan ku fiicaneyno. Taasi waxay hagaajineysaa heerkeena tamarta, taas oo kuu ogolaaneysa inaad ku sii adkaato jimicsiga!
Qamadi Methandrostenolone (Dianabol) budada (72-63-9) Qiyaasta
Qiyaasta Dianabol ee bilowga ah
Qiyaasta Dianabol ee dadka isticmaala dhexdhexaadka ah
Isticmaalka Dianabol ee isticmaalayaasha casriga ah
Qiyaasta Dianabol ee haweenka
Dheefaha methandrostenolone (Dianabol) budada (72-63-9)
Kordhinta heerarka testosterone
Kordhinta wax soo saarka unugyada dhiigga cas
Horumar weyn ee muruqyada iyo xoogga
Soo iibso Methandrostenolone (Dianabol) budada Buyaas.com